Aza adino fa tsy hankatoa io fitondrana io izao ny Sénat iray manontolo izay HVM no maro an'isa ao, nefa mbola hoe ho ravana koa izy.
Ho sarotra ny ahazoana 3/4 parlement anitsiana ny Lalampanorenana manaraka.
Mila miova paika lehibe ny Filoha fa mavesatra iny hoditr'akondro napetraky ny mpiara-miasa iny. Sarotra be ny miala eto amintsika izay tompon'antoka tamin'iny, gouvernemanta iray manontolo sy ny Praiminisitra tsy afabela amin'iny satria conseil des ministres no nanapaka azy iny. Ny cabinet ministériel sy juridique rehetra nidona amin'ny tamboho avokoa?
Ny filazana kosa hoe tsy hisy fampandrosoana ny faritra amin'izao Lampanorenana izao dia tsy marina.
Betsaka ny rafitra tokony mbola atsangana ao fa tsy natao nadritra izay 10 taona nijoroan'io Lalampanorenana io.
Tokony ho fidiana ny Chef de province, ny Chef de région, ny conseils provinciaux, ny conseils régionaux. Izany ragôva izany anarana ovaina fotsiny, fa ny Lalampanorenana ankehitriny dia manome fahefa lehibe ny Chef de province sy ny Chef de région.
Ny filoham-pokontany izany dia efa betsaka ny faritra nifidy ny filoham-pokontany, tsy zava-baovao izany, ary tsy voararan'ny lalàna.
Tamin'ny fitondrana teo aloha, izay faritra natahorany ara-politika dia tsy nasiany fifidianana filoham-pokontany fa notendreny, tsy mety izany, fa ataovy mitovy ny rehetra, rehefa fidiana dia fidiana avokoa.
Azo atsaraina ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana. Azo ovaina ny tetibola na ny Loi des finances, izay azo omena ny fokontany ny 50% budget, 25% communes, 10% Province, 15% Etat central, fa amin'izao 5% collectivité, 95% central.
Ampisehoy fa tena te hiroso marina amin'ny fampandrosoana ny faritra.
Ny lalàna momba ny fananan-tany, omeo ny Faritra no misahana azy.
Ny lalàna mifehy ny harena ankibon'ny tany, na ny code minier, omeo ny faritra mitantana azy. Azo atao daholo izany.
Aza ariana amin'ny resaka budget 30 miliara ariary sénat ny olona, izay tsy mahavita lalana 10km akory izany. Tsy ny fanafohanana na tsia ny sénat no hanavotra antsika. Lalana Analakely Mahazoarivo fotsiny no vitan'izay. Echangeur Ambohibao Ivato aza tsy vitan'izay akory.
Amafisiko fa azo atao ny mampandroso ny faritra amin'io Lalampanorenana io, rehefa tonga moa ny fotoana iarahan'ny rehetra manova an'io vao maika tsara, fa amin'izao dia efa azo iaingana io.
Rahateo te hilaza ve ny mpitondra amin'izao hoe tsy nitsinjo ny faritra izy tamin'ny 2010, izay izy no nanao an'io Lalampanorenana io, ary izy no nanisy gadanà matanjaka be tsy ahafahana manova an'io? Izay hitany izao fa tsy voavaha ilay gadanà lehibe napetrany tamin'izany.
Rano raraka iny, tsy misy hifanomezan-tsiny, averiko indray, aoka hiaraka ny rehetra ampandroso ity Firenena ity, vorio ny olona, antsoy ny Malagasy rehetra, ireo manam-pahaizana, ireo mpahay toe-karena, na eto an-toerana na any ivelany.
Ajanony any ny adilahy politika.
Tsy fiaraha-mitantana na fizarana seza, averiko hatrany izany, fa manana anjara fampandrosoana azon'ny rehetra atao eto amin'ny firenena.